Amathiphu wokuzijabulisa umdlwane | Izinja Umhlaba
Amathiphu wokuzijabulisa umdlwane
El umdlwane kumele uhlangane ngakho-ke uyakwazi ukuxhumana nezinye izilwane nabantu. Inja esikhulile enezinkinga zokuxhumana nabantu izothatha umsebenzi omningi futhi-ke bazoba nezinkinga, kwesinye isikhathi ngokuhlukumezeka, kwesinye isikhathi ngokwesaba noma ukuzivumelanisa, yingakho kubaluleke kakhulu ukuzihlanganisa lapho ziyimidlwane, ukuze zifunde ukuxhumana ngokwemvelo.
Ake sibone imibono elula ye- siza umdlwane ukuhlangana. Izinyanga zokuqala nokufunda kwakhe njengomdlwane kuzophawula kakhulu isimilo sakhe njengenja endala. Kungakho-ke kumele sinikeze ukubaluleka okukufanele kulesi sigaba senja yethu.
Kubalulekile ukuthi ezinyangeni zokuqala zokuphila ake sethule ezinye izilwane ezifuywayo. Kulokhu, izinja ezinesineke, izinja ezinesimo esihle, zilungele lo msebenzi. Bazabafundisa indlela yokuziphatha kanye nokuxhumana. Kumele sikhumbule ukuthi inja akufanele iphume ihlangane nezinye izinja noma izilwane ezifuywayo ngenkathi ingenayo imigomo, kepha uma sinenja enemithi yokugoma esesikhathini sayo esingayethula kuyo, izolunga .
Imidlwane akudingeki nje ukuthi yenzeke hlangana nezinye izinja, kepha nangamakati nezinye izilwane ezifuywayo, ngakho-ke bayazi ukuthi kufanele baziphathe kanjani nabo. Kuyindlela yokubafundisa konke abazokuthola, ukuze balahlekelwe ukwesaba bese bekushintsha ngenxa yelukuluku.
Kufanele hlangana nabantu futhi. Ukuxhumana nabantu kubalulekile. Singakwethula kuwo wonke amalungu omndeni futhi siwayise ezindaweni lapho singathola khona abantu abangaxhumana nabo. Uma kunezingane ezingcono kakhulu, yize kufanele futhi sizichazele ukuthi zingahlangana kanjani nenja futhi zizethule. Izinja ezihlangana nezilwane eziningi ezifuywayo nabantu ebusheni bazo yizilwane ezilinganiselayo njengabantu abadala.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Amathiphu wokuzijabulisa umdlwane
Injani iBrittany Epagneul
Ungayisiza kanjani inja ngokukhathazeka ngokwehlukana